အသက် ၅၀ - အမျိုးသားများစွာသည်သူတို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံး PMO ကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ကြသည်၊ အဘယ်ကြောင့်သူတို့သည်လိင်မှုကိစ္စကိုညစ်ညမ်းစေနိုင်သည်၊ သို့သော်စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်အဘယ်ကြောင့်မရနိုင်ကြောင်းမေးမြန်းခြင်းမရှိပါ။
Nofap ငါ၏အစိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အပျက်သဘောအတှေးအကုသပေးခဲ့၏။ Living ဘဝမရောက်မီကျောထိုင်ခုံ၌ဆယ်အော်ဟစ်ငြင်းခုံကလေးများနှင့်အတူကားတစ်စီးမောင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှိုးတဦးတည်းနံနက်သတိရနှင့်ငါ့စိတ်ထဲ၌လည်းငြိမ်ဝပ်ခြင်းရှိ၏သဘောပေါက်!
ကျွန်ုပ်သည် gluten, dairy နှင့် MSG ကိုကျွန်ုပ်၏အစားအစာမှဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီး၊ IBS သည်ကျွန်ုပ်တစ်သက်တာလုံးလုံးပျောက်ကွယ်သွားသည်။ လူတွေကငါ့ကိုဒီလိုပျင်းစရာကောင်းတဲ့အစားအစာကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲလို့ငါ့ကိုမေးတယ်၊ ငါရယ်လိုက်တာ။ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုသာရက်အနည်းငယ်မျှသောက်ပါ၊ ရေသောက်ပါ။ ကံကောင်းပါစေ။
ကျွန်တော့်အသံကပိုမိုနက်ရှိုင်းလာပြီးအသက် ၅၀ ရှိပါပြီ။ ငါငယ်ငယ်တုန်းကလူတွေက“ မင်းရဲ့အသံဘယ်တော့မှကွဲတော့မှာလဲ” တဲ့။ ငါဆိုလျှင်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်ကကျွန်ုပ်ရနိုင်သည့်မှတ်စုများကိုမရနိုင်တော့ပါ။ ၁၄ ရက်တာဟာ shit ကိုလုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ မင်းရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာအပြောင်းအလဲမရှိဘူးလို့သင်ထင်ရင် ၁၂ လအကြာမှာ nofap ကိုအိတ်ထဲထည့်နိုင်တယ်။ တခြားယောက်ျားတွေသူတို့ကိုယ်သူတို့ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့မတားဆီးပါနဲ့။ ၎င်းကိုကပ်ထားပါ၊ သင် ပြန်၍ မလုပ်တော့လျှင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်သည်ထူးခြားသောပြောင်းလဲမှုများကိုခံစားရလိမ့်မည်။
ကျွန်တော့်ဇနီးကကျွန်မကိုနှစ်ခါစွန့်ခွာသွားခဲ့တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဟာအိမ်တစ်အိမ်တည်းမှာနေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်တစ်နှစ်လုံးအိပ်ရာမ ၀ ယ်ဘူး။ ငါ PMO အခမဲ့တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်, ငါအလွန်ခံစားရတယ်, nofap ၏အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးအသီးအနှံကိုရိတ်ခံစား, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခံစားရတယ်နှင့်ငါတို့အများကြီးပိုကောင်းတလျှောက်လာပြီနေကြသည်။ PMO ကကျွန်တော့်ကိုထိခိုက်နေတယ်ဆိုတာတောင်မှကျွန်တော်အရင်တုန်းကလိုပဲပြန်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါသူ့ကိုအရမ်းချစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ဇနီးကကျွန်တော့်ခရီးကိုဘယ်တော့မှစိတ်မ ၀ င်စားခဲ့ဘူး၊ ငါနှစ် ၄၀ နီးပါးမှန်မှန်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုစွန့်လွှတ်ဖို့အရမ်းခက်ခဲခဲ့တယ်။ မင်းရဲ့ခင်ပွန်းကမင်းကိုသူရှိနေတာဘယ်လောက်ကံကောင်းလဲဆိုတာမသိဘူး။
မရလဒ်များအရအိပ်ယာအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့သည်အဘယ်ကြောင့်တူညီသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားကြရပြီး၊ အကယ်၍ သင်သည်ပြန်လည်အသက်ဆက်နေလျှင်သင်၏လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အချိန်က ၆ ရက်၊ ဘာမှမရှိဘူး ကြမ်းတမ်းတဲ့အသံကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ ၆ ရက်ကမင်းအတွက်အရမ်းကောင်းတဲ့အားထုတ်မှုဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုကိုကျော်လွှားဖို့နှစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူခဲ့ရတယ်။ ငါပြောတာကလူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရတယ်၊ ငါသိတဲ့လူတွေကိုတောင်ချစ်တယ်။ စကားမပြောဘဲထိ မိ၍ လဲခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်မိုက်မဲသောအရာတစ်ခုခုပြောပြီးတစ်ခြားသောနေ့များအတွက်နောင်တရနေခြင်း။ အဆိုပါအရှက်ကနေအနီရောင်ရဲ။ nofap နဲ့ကပ်ပြီးပြန်မနေပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်မျှော်လင့်နေတဲ့အရာကစကားပြောဆိုမှုများကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်အခြားသူများကိုသင့်ရဲ့အကြည့်နှင့်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်၎င်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ယောက်ျားသိပ်မများဘူး။
ငါလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားနေရတယ်လို့မထင်တော့ဘူး။ ငါရှက်တတ်တယ်လို့အမြဲထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါကငါ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းပဲ။ ငါဘယ်သူလဲ ငါဟာကလေးဘဝတုန်းကရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာမေ့သွားခဲ့တယ် အခု ၃၈ နှစ်ကြာရှက်ရွံ့နေတဲ့ရှက်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်မနေတော့တော့ပါ။ fapping နှင့်ပါ ၀ င်သောဓာတုပစ္စည်းများအကြားဆက်စပ်မှုကိုနှစ်နှစ်ကြိုးစားနားလည်ပြီးနောက်ငါအရှုံးပေးလိုက်ပြီး၊
ယခုငါကတခြားဘက်မှာဖြစ်ကြောင်းကို (လုံခြုံစွာငါမျှော်လင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်မရဲ့အစောင့်ချကြကုန်အံ့ဘယ်တော့မှနိုင်သည်) ငါနေရာတိုင်းငါသွားမိုးသည်းထန်စွာ fappers ကြည့်ပါ။ သူတို့လမ်းလျှောက်သူတို့ကိုငါကြည့်ရှုသောအခါချက်ချင်းပျောက်သည်ကြည့်ရှုအဖြစ်သူတို့ကမြေပြင်ကိုကြည့်။ သူတို့ကပင်ကိုကြည့်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ပိုက်ဆံယူပြီးဆွဲဆောင်မှုငယ်ရွယ်ငွေရှင်းကောင်တာတွင်၏တည်ရှိမှုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သူတို့တစ်တွေဝက်ဝံကွားနိုငျ thankyou mumble ပါဘူး။ သူတို့ဟာခံစားချက်မှောင်မိုက်မျက်စိတစ်စှဲလမျးသူ၏မျက်လုံးများရှိသည်။ ငါသည်ဤဘယ်လိုသိရသလဲ ငါ 38 နှစ်ပေါင်းတဦးတည်းရှိသောကြောင့်ငါသည်ဤသိကြ! ယခုမူကားငါ၏အကမ္ဘာကြီးကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးငါက၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်၏။ ငါငါတို့ရှိသမျှသည်အချို့သောလမ်းအတွက်ဖြစ်ကြောင်း, ငါသည်ဤလောက၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်း nofap ရှေ့တော်၌ကိုယ်ကိုပြောသည်ပါလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်အခုကြုံနေရငါဘယ်အရာကိုမှအရေးပါမှုအတွက် pales ။ ဒီစိတ်ကူးကိုမရ, ရလဒ်များအရအိပ်ယာမဟုတျပါဘူး, ဒီရုံပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းငါ၏အဟောင်းများကို fapping အချိန်အသုံးပြုနေခြင်းမရှိပါ, ဒီနေဆဲငါ့ကိုနေ့တိုင်းအံ့သြသောငါ၏ဝိညာဏ်တစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်ပိုပြီးအသက်တာကိုပျော်မွေ့, အမျိုးသမီးကဒီတွေ့နိုင်ပါသည်။ သူတို့က, မင်္ဂလာရှိ၏ရည်မှန်းချက်ရှိပြီး, ယုံကြည်မှုသောလူအပေါင်းတို့အားဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။ အခြားဘက်ခြမ်းမှတစျဆငျ့ကိုချိုးဖျက်နှင့်သင်ကွဲပြားဒီဂရီ၌ဤတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာမခွဲခြားနှစ်နှစ်ခဲ့ပေမယ့်ငါကဒါ fucken မကောင်းတဲ့ချင်တယ်။ ကခငျြ, ကအောင်မြင်ရန်။ ငါ၏အ nofapper မိတ်ဆွေများကိုအသကျရှငျ Start!
ငါမှာ ED ပြproblemsနာမရှိခဲ့ဘူး၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အဆက်အသွယ်မရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာပြproblemsနာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး၊ ယောက်ျားများစွာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရံဖန်ရံခါကြည့်ရှုခြင်း၊ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်တစ်ချိန်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားသည်၊ သို့သော်ငါလိင်သည်အလွန်ကျေနပ်ရောင့်ရဲသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်၌အချိန်ဖြုန်းတီးဟန်ရှိသည်။ မင်းကိုသတိရပါ၊ ငါရှိနေသောနေရာကိုရောက်ရှိရန်ခက်ခဲသောအလုပ်များစွာလုပ်ခဲ့ရပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် dopamine အပြေးအလွှားကိုအရူးစွဲနေခဲ့သည်။
[အကြံဥာဏ်တောင်းခံမှုအတွက်ဤအဖြေကိုဖြေကြားရာတွင် - ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး (၂) နှစ်ကျော်အတွင်းပျော့ပျောင်းသောစိုက်ထူခြင်း (သို့မဟုတ်လုပ်ရပ်အလယ်တွင်ဆုံးရှုံးခြင်း) ကိုခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည်အိုမင်းခြင်းနှင့် (တစ်ပတ်လျှင် ၅ ကြိမ်) ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပေါင်းစပ်မှုဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါက ၀ န်ကြီးချုပ်ပဲ။ ၁၀ မိနစ်ပဲ PMO အခမဲ့ပါ။ ပိုပြီးကြားချင်တယ်။ "
ခင်ဗျားဆက်ဆံရေးရှိလား ကျွန်ုပ်အသက် ၅၁ နှစ်ရှိပြီး၊ သင်ကိုယ်တိုင်လည်းအလားတူအသုံးပြုမှုနှုန်းရှိသည်။ ကျွန်မရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုကယ်တင်ဖို့အချိန် nofap ကိုစတင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်၏အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးငယ်ရွယ်သော GF ကကျွန်မကိုအရမ်းအလုပ်များနေပြီး PM အကြောင်းတော့မစဉ်းစားတော့ပါ။ ငါ ED ၏အများစုရောဂါလက္ခဏာများအလွန်အကျွံ PM ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ ဤသည်မှာယောက်ျားများစွာသည်သေသည်အထိသူတို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ကြသနည်း၊ သူတို့၏ဇနီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်မည်သည့်အခါမျှသံသယမရှိကြပါ။
နောက်ဆုံးထွက် - 1000 ရက်။
ငါနောက်ဆုံး 1000 ရက်ပေါင်းကျော်ဤမျှလောက်ရေးထားပြီဒါပေမယ့်ကျွန်မအသက်တာ၏4/ 5th များအတွက်ခဲ့သည့်စွဲလမ်းဖျက်သိမ်းရေး၏ဤလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသင်ယူကြရာ၏အနည်းငယ်ဝေမျှပါလိမ့်မယ်။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်သင့်ကိုပြောင်းလဲစေသည် ၎င်းသည်သင်၏ကမ္ဘာ၊ အခြားလူများနှင့်သင့်အပေါ်အခြားသူများ၏အမြင်အပေါ်သင်၏အမြင်ကိုပြောင်းလဲစေသည်။ သငျသညျရံဖန်ရံခါလုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဘူးမဟုတ်လျှင်, ဒါပေမယ့်ငါဒီမှာရံဖန်ရံခါ fappers ရှိပါတယ်သံသယ။ ငါနောက်ကျောရိုက်ပုတ်အဘို့ဤရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါ, ငါလွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ကျော်ကဒီ site ကိုအပေါ်ထိမိ။ လဲသောအခါငါဖတ်ရှုဖို့ကြိုက်တယ်လိုအတိအကျအရာရေးသားခြင်း။ ငါတစ်ခုခုမှားနေတယ်ဆိုတာသိပေမယ့်ဘာလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်ဇနီးကကိစ္စတစ်ခုရှိခဲ့ပြီးကျွန်တော့်ကမ္ဘာကြီးကိုကွဲစေခဲ့တယ်။ အဖြေများကိုရှာဖွေရင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်ချင်သောပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုရင်းဒီ site ကိုလဲကျမိသည်။ ၀ န်ကြီးချုပ်ကကျွန်တော့်ကိုထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိဟုယုံကြည်သည်။ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အနိမ့်ဆုံးနေရာမှာရှိနေပြီး၊ ဒီအခွံမာသီးဖြစ်ရပ်မှန်မှန်ကန်မှဖြစ်ခဲ့ရင်၊ ငါ့ဘဝရဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုသတိမပြုမိခင်မှာထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ခဲ့တာ။
ငါတို့အချို့သည်ဤနေရာတွင်ရောက်ရှိနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်လိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တချို့ကဒီမှာရှိနေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့အဖော်ကိုရှာချင်လို့ပါ။ တချို့ကလိင်ကိုသာလိုချင်ကြသည်။ သို့သော်သင်၏လှုံ့ဆော်မှုမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၎င်းသည်အရေးမကြီးပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင် nofap ကိုအောင်မြင်ခဲ့လျှင်သင်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေပိုမိုကောင်းမွန်သောလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
အမြိုးသမီးမြားအသည်းအသန်သတ္တဝါများဖြစ်ကြပြီးအသည်းအသန်ယောက်ျားအလိုရှိကြသည်။ သူတို့ကသေချာပေါက်အိပ်ရာပေါ်မှာကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်သောယောက်ျားချင်ကြပါဘူး။ ဖျော်ဖြေတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်သရုပ်ဆောင်နေသည်။ ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အဓိကပြောင်းလဲမှုတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံမှုအပေါ်မည်မျှကွဲပြားခြားနားကြောင်းသတိပြုမိခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အတွေးတွေကိုအမြဲတမ်းလွှမ်းမိုးလေ့ရှိတယ်၊ အခုတော့ငါဟာငါ့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေပြီး၊ ငါ့ဘဝနဲ့ဆက်ရှင်သန်နိုင်ပြီ၊ ငါအခုရှိနေတဲ့လိင်ဟာငါအရင်ကကြုံခဲ့တာထက်ပိုကောင်းတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာတကယ်ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖြစ်ပြီးအိပ်ရာထဲမှာဘာလုပ်ရမှန်းစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူး။ အရာအားလုံးကသဘာဝကျလာတာကြောင့်နှစ်ပေါင်းသန်းနဲ့ချီကြာအောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်။ ငါ့ခေါင်းထဲမှာညစ်ညမ်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေမရှိဘူး၊ ငါ့ရဲ့လုံလောက်တဲ့စွမ်းရည်ကအံ့သြစရာပါ။ ငါသုတ်ရည်ထိန်းသိမ်းခြင်းလေ့ကျင့်သည်နှင့်ငါနောက်ဆုံးသုတ်ရည်လွှတ်ပြီးကတည်းကအချိန်ပမာဏအရလူတွေကငါ့ကိုဘယ်လိုဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာသတိပြုမိပါတယ်။ ဒီစိတ်ကူးမရ, ဒီအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ (ငါလိင်မှတဆင့်အော်ဂဇင်အကြောင်းပြောနေတာ၊ တစ်သက်လုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးဘယ်တော့မှတော့မှာမဟုတ်ဘူး) fapping ကိုစွဲလမ်းမှုတစ်ခုအဖြစ်သင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ အော်ဂဇင်သည်စွဲလမ်းစေသည် သင်သည်လိင်နှင့်အော်ဂဇင်ကိုမရရှိလျှင်၎င်းသည်သင်၏လိင်ဆိုင်ရာအမြင်ကိုပြောင်းလဲစေသည်။ အဆိုပါ Flatline အစစ်အမှန်ပေမယ့်ဖြစ်ပျက်ရန်လိုအပ်သည်။ အဆုံးသည်မြင်ကွင်းမဟုတ်သကဲ့သို့နေ့တိုင်းပိုမိုနီးကပ်စွာရှိနေသည်ဟုထင်ရသည်။ မင်းဘဝမှာပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုလိုချင်လို့ပါ။ ဤသည်သင်၏တစ်ခုတည်းသောဘဝပင်ဖြစ်သည်၊ ဤကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်သင်၏တစ်ခုတည်းသောအချိန်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရေတွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ဘ ၀ သည်ထိုထက် ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနိုင်သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုဖြတ်ပြီးသင်မသိသောတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ရံဖန်ရံခါကောင်းသောကံကြမ္မာအကြောင်းကိုဖတ်မည့်အစားသင်၏ဘ ၀ ကိုဖန်တီးပါ။ မင်းလုပ်နိုင်တယ်!!